TOP 100 Life Quotes Maka 2020 - Pedia na-ekwu okwu
119 ruturu na okwu
Ọtụtụ mmadụ na-agụta afọ ole ha dị ndụ, mana nke ahụ agaghị abụ ụzọ. Ọ dị mkpa gbaa mbọ hụ na ị biri ndụ n’afọ ndị ahụ ma hụ na ndụ zuru ezu n’ime afọ niile ahụ ị na-ebi.
Mgbe ụfọdụ, anyị na-agba àmà ọtụtụ ihe na ndụ na ndụ anyị nke na anyị ga-akwụsị ịhụ ụzọ nke ihe ndị ahụ. N’ezie, ihe nwere ike agaghị eme dịka ịchọrọ n’oge niile, mana ekwesighi ikwe ka ụdị ihe ahụ na-emebi emebi bebi ịdị n’ime gị.
A ga-enwe oge ị ga - enwe ọdịda, mana nke ahụ ga - adị mma ọzọ ebe ọ bụ na amaara ndị ahụ oge ọjọọ iji nye gị mmụta kachasị mma nke ndụ gị. N'ọnọdụ a, ọ dị mkpa ka ị na-aga site na ndu atụ dịka ha ga - enyere gị aka inwetaghachi ụdị ahụ dị mma n'ime gị.
Vibdị vibes ahụ ga - enyere gị aka na - ebugharị gị ọzọ, ka ị wee bulie gị elu ọzọ wee mezie ihe niile enyere gị aka ịme.
Ndụ agaghị adị otu ihe ahụ mgbe niile. Na ndụ, ị ga-ezute ọtụtụ oge na-adịghị eme dịka ọchịchọ gị. Agbanyeghị, nke ahụ dị mma ma ịkwesịrị idozi ihe n'ụzọ nke gị.
Ihe niile agaghị eme dịka masịrị gị, mana ị gaghị enwe nhọrọ ọtụtụ oge. Ọ dị mma ka ịghaa ihe niile ahụ mere na ndụ gị ebe ọ bụ na ha ga-enye gị mmụta maka ndụ gị. Ahụmahụ gị na ndụ na-adabere n'ụzọ ị ga-esi dozie nsogbu ndị na-abịa n'ụzọ gị.
Y’oburu n’inwe uche mara, igagh arapara n’ihe n’enweghi nsogbu obula na ndu gi. N’aka nke ozo, ekwesiri ikwere mgbe nile ichikota ihe mere gi na ihe omume nke ndu ma tinye ihe ndia n’abia.
Oge ojoo nyere gi ihe nkuzi kachasi ndu gi, ọ dịkwa nke ukwuu nke ukwuu iji nweta ọtụtụ mmụta ndụ gị n'ihe omume ndị ahụ. Ndị a ndu atụ ga-enyere gị aka ịlaghachi mmụọ ahụ na ị nwere ike idafu mgbe ị na-agabiga nsogbu nke ndụ gị.
N’ezie, ha dị mkpa iji hụ na ike jupụtara na gị ọzọ. Ọzọkwa, ha na-akwado gị ijikere ka ị wee nwee ike ịnagide ihe isi ike niile na-aga ịfefe n'okporo ụzọ gị.
Mmadu choro ihe isi ike na ndu nihi na odi nkpa inwe ihe ịga nke oma. - APJ Abdul Kalam
Anyị, ụmụ mmadụ nwere ebumnuche ịbụ nke a na-eburu ọ joyụ. Ọ bụrụ na ọ joyụ ahụ adịgide ogologo oge,…
Anyị niile nwere nrọ na ebumnuche na ndụ. Mana oge obula, o bu ihe anyi n’ahu anya…
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibi ndụ gị ọ happụ, echela banyere afọ ndụ gị. I kwesiri ichebara echiche…
Ndụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ dị mkpa ka anyị jiri ya mee ihe. N'etiti mmụba na mgbada, anyị…
N'ebe ọ bụla ndụ kụrụ gị, maa mma n'amara. - Ilu Old French
Oge gị nwere oke, yabụ egbula ya na ibi ndụ onye ọzọ. - Steve Jobs
Oge gị nwere oke, yabụ egbula ya na ibi ndụ onye ọzọ. Ekwela ka nkita kpuchie gi -…
Ndụ abụghị ịchọta onwe gị. Ndụ bụ imepụta onwe gị. - George Bernard Shaw
Dị ka mmadụ, e jirila onyinye dị iche iche gọzie anyị. Anyị niile nwere ihe pụrụ iche gbasara onwe anyị…
Hụ ndụ ị na-ebi n'anya. Bie ndụ ị hụrụ n'anya. - Bob Marley
Ndụ bụ ngọzi ma anyị kwesịrị inwe ekele maka ya na nkeji ọ bụla. Ọ na-emepe anyị…
Nhọrọ siri ike, ndụ dị mfe. Nhọrọ dị mfe, ndụ siri ike. - Jerzy Gregorek
Nhọrọ siri ike, ndụ dị mfe! Ee, oge ụfọdụ, ị nwere ike ịme nhọrọ ndị siri ike na ndụ gị, mana…
Ebe ịhụnanya dị, ndụ dị. - Mahatma Gandhi
Dochọtala ndụ obi ụtọ. Make na-eme ya. - Camilla Eyring Kimball
Obi ụtọ bụ ihe ị ga - enweta n’obere ihe. Na ịchọpụta obi ụtọ, ị…
Omume dị ukwuu na-aghọ nnukwu ụbọchị nke na - aghọ ọnwa dị ukwuu nke na - aghọ nnukwu afọ nke na - aghọ nnukwu ndụ. - Mandy Hale
Stzụlite nnukwu agwa na-ewe oge na mgbali. Ọnọdụ dị iche iche na ndụ na-eme ka anyị dị iche na-eme ka anyị pụọ iche…
Ọrụ m na ndụ abụghị naanị ịlanahụ, kama ka ị na-eme nke ọma. - Maya Angelou
Ọ dị mma, ọtụtụ n'ime anyị na-ahọrọ ibi ndụ echefu echefu. Anyi eche na ibi ndu udo…
Ọ bụghị ihe anyị nwere na ndụ anyị, mana ọ bụ onye anyị nwere na ndụ anyị guru nke ahụ. - JM Laurence
Ọ bụrụ na i jiri ndụ gị tụnyere ihe ị nwere na ndị ị na - eso ya -…